भिडियो हेरेपछि हातखुट्टा काँपे : खाडीमा उँट चराउन छोरा पठाउँदिन | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
भिडियो हेरेपछि हातखुट्टा काँपे : खाडीमा उँट चराउन छोरा पठाउँदिन
साउन ३०, २०७५ बुधबार १५:३३:३६ | मेरो कथा मेरो भोगाई
कमला खड्का/खोटाङ ।
म अहिले ५३ वर्षको भएँ । बुढ्यौलीले छुँदैै गर्दा अनेक देख्न पर्ने । अनेक भोग्न पर्ने । केही समयअघि मैले नसोचेको कुरा भिडियोमा देखेँ ।
गाउँमा वित्तीय साक्षरताको कक्षा चलिरहेको थियो । बुहारीहरु जान्थे । म त जाने गरेको थिइनँ । तर एक दिन धेरैजना जम्मा भएको देखेर म पनि गएँ । भिडियो देखाइएको रहेछ । ओहो ! त्यो भिडियो देखेर त मेरो हात खुट्टा काँपे ।
मेरा पनि दुई छोरा रहरै रहरमा विदेश गएका थिए । मैले त नजानु यतै केही गरौंला भनेको पनि हो । तर मानेनन् ।
विदेश पुगेपछि पनि कहिल्यै नराम्रो छ भनेनन् । तर त्यो भिडियो हेरेपछि त मेरा छोराले पनि यस्तै दुःख पाएका होलान् भन्ने जस्तो लाग्यो । खाडी देशमा कसरी बसेका होलान्, खान पाए कि पाएनन् होला, भनेको बेला पानी पनि खान पाएनन् कि भनेर साह्रै चिन्ता लाग्यो । रातभरी निद्रा लागेन ।
छोराहरु पनि उस्तै । हप्तौं बिरामी हुँदा पनि मलाई भन्दा रहेनछन् । मैले कस्तो छ भनेर सोध्दा जहिले पनि राम्रो छ आमा भन्ने । यहाँ मलाई त सानो भनेर साह्रै माया गर्छन्, तपाईँले जस्तै माया गर्छन्, लगाउन दिन्छन् खान दिन्छन् भन्थे । तर के को हुन्थ्यो ? त्यो भिडियो देखेपछि पो थाहा पाएँ ।
कतिका छोराले कसरी उँट चराएका । कतिका छोरा बिरामी पर्दा पनि उपचार नपाएका । कोही रोड खन्दा रहेछन् । बाउआमा कतिका रोइरहेको देखेँ । त्यो देख्दा साह्रै नरमाइलो लाग्यो ।
मेरो माइलो छोरा कम्पनीमा काम गर्थ्याे । मैले त जसरी पनि घर आइज बाबु भनें । अहिले त आएको छ । कान्छो चाहिँ दुबईमै काम गर्दैछ । गर्मी हुने ठाउँमा सुतेकै बेला केही पो हुन्छ कि भन्ने चिन्ता ।
खै किन हो हिजोआजका मान्छेहरु विदेशमा मात्र पैसा देख्छन् । हाम्रो पालामा त त्यस्तो थिएन । जे भए पनि गाउँघरमै बसेर गरीखाने चलन थियो । पराई देशमा न हिँड्न जानिएला, न बोल्न । अनि कसरी पैसा कमाइ होला भनेर सोच्नु ।
बरु ५० रुपैयाँ खर्च गरिन्थ्यो भने २० रुपैयाँले पुर्‍याउने र ३० रुपैयाँ बचत गर्ने गर्नुपर्छ । अर्काको देशमा जान हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई त । अहिले माइलो फर्किएपछि कुखुरा, बाख्रा, तरकारी खेती र भैंसी पालेका छौं ।
विदेशको जस्तै नभए पनि घर खर्च चलाएर यसो दुःख बिमार पर्दा उपचार गर्न पुग्छ । अर्काको देशमा उँट चराउन जानु राम्रो होइन । त्यसको सट्टा घरमै बाख्रा चराउ छोराहरु भन्छु म त । मलाई त साह्रै मन परेन विदेशको काम त । सकिन्छ भने त खाडीका देशमा कसैका छोरा पनि नगएकै राम्रो ।
Feb. 5, 2019, 10:54 a.m.
आमाको कुरा सहि हो. तर अर्थ फरक छ , कस्तो काममा जाने हो त्यसमा भर पर्छ / मा पनि एस एल सी पास भएको छैन, तर २० बर्ष देखि अरबमा घुमिरहेको छु, खुशी छु, अनि परिवार पनि खुशी छन् /यतै बस्ने विचारमा छु / हजुर नपठाउनुस, तर हरेक दिन दुइ हजार नेपाली यस्तै काममा आउँदैछन् / हस् आमा गन्थन धेरै भएछ /